टिकटकमै रोमान्स, भिडियो बन्यो भाइरल ( हेर्नुस भिडियो) – News543Online
टिकटकमै रोमान्स, भिडियो बन्यो भाइरल ( हेर्नुस भिडियो)
March 13, 2021 adminLeaveaComment on टिकटकमै रोमान्स, भिडियो बन्यो भाइरल ( हेर्नुस भिडियो)
केही दिनअघि सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिगत दुरी कायम राखिरहेका दुई महिलाको वार्ता यस्तो थियोः ‘आप्पोई, तिम्लाई टिकटकबारे थाहै छैन त ? ढाँटेको होला !’नजिकै बसेकी अर्की महिलाले ठूलै कुरा गु माएको भाव व्यक्त गरिन्। त्यसपछि ती महिलाले टिकटकको बखान सुरु गरिन्। टिकटकमा भएका राम्रा गीतमा आफैँ हिरोइन बनेर भिडियो बनाउन पाइन्छ, हिरो हिरोइनले जस्तै डाइलग बोल्न पाइन्छ उनले सुनाइन् ।
अझै अगाडी बढेर भनिन्- नाच्न पनि पाइन्छ। अझै आफैँले अलि दिमाख लाएर भिडियो बनाउने हो भने त भाइरल पनि भइन्छ। तिम्लाई थाहा छैनरैछ, टिकटक बनाएर कति केटीहरु त हिरोइनै बनिसके !अर्की महिलाको अनुहार भने नि’न्याउरो थियो किनभने यतिधेरै फाइदा भएको टिकटकबारे उनले थाहै पाएकी थिइनन्।
चिनियाँ कम्पनीले बनाएको तर त्यहाँ प्रायः प्रयोग नहुने म्युजिकल्ली हिजोआज नाम परिवर्तन भएर टिकटक भएको छ। भारतमा लोकप्रिय भएपछि नेपालमा पनि छिरेको टिकटक अहिले नेपालीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने मोबाइल एपमध्येमा पर्छ। फेसबुकपछि सबैभन्दा धेरै यही प्रयोग हुने केहीको धारणा छ। तर टिकटकमा पछिल्लो समय बिकृती पनि बढेको छ । युवतीले अनेक हर्कत गर्न् थालेका छन् । एउटा यस्तै भिडियो अहिले भाइरल बनिरहेको छ ।
सारै दु:खद खबर : कुर्सीबाट लडेर गाउपालिका अध्यक्षको मृत्यु ।
चर्चित उद्योगपती तेजेन्द्र र सुन्तली खड्का दम्पत्तीको को’रो’ना सक्रमणबाट नि’धन😭😭
पढ्दा पढ्दै सानै उमेरमा केटासंग भा गेकी सपनाका पति यि हुन्!!
स्वास्थ्य उपचारका लागि माओवादी नेता पुन बैंकक प्रस्थान